Pfupiso yebhuku "El camino" naMiguel Delibes | Zvazvino Zvinyorwa
Pfupiso yebhuku iri «El camino» naMiguel Delibes
Munyori wechiSpanish Miguel Delibes chinobata mufananidzo, tanga kubatanidza mubhuku rako "Nzira", kwechokwadi munharaunda uye bhuku rekudzidza. Hunhu hwakasviba, tsika dzekumaruwa uye yakafara gallery yevatambi zvinoumba ndangariro dzehudiki dze protagonist, idzo dzinoenderana nemunyori anoziva zvese nerwiyo rune mutsindo uye chimiro chakazara nehunhu uye hunyoro.
Muchikamu chino, tichaona pfupiso yebhuku "Nzira" naMiguel Delibes, uye panguva imwecheteyo, isu tichaisa munyori mune izvo zvinyorwa zveSpanish zvave zviri panguva yese iyi.
1 Munyori: Miguel Delibes
2 «Nzira»: Pfupiso
2.1 Daniel Diki Zizi
2.2 Shamwari nhatu
2.3 La Mica naMariuca-uca
2.4 Tsaona inotyisa
Munyori: Miguel Delibes
Miguel Delibes inogona kuve yakagadzirirwa munguva yekunyora inoenderana nemakore ari pakati pe 40s uye 50s. Munguva iyi, rungano rwakamuka zvakare mushure meSpanish Hondo yeVanhu uye yakaratidzirwa semhando yakakodzera kwazvo kuratidza zvese zvakaitika panguva yehondo yevagari uye kwemakore anotevera, ndiko kuti, mamiriro ezvinhu anotyisa ezvematongerwo enyika ayo nyika.
Miguel Delibes chinobata mufananidzo akaberekerwa muValladolid muna 1920. Akatanga akazvipira bhizinesi uye mutemo, zvidzidzo zvaakabudirira kupedzisa, achiva Purofesa weMabhizimusi Mutemo muChikoro cheMabhizimusi cheiyo imwechete Valladolid. Gare gare uye achibatanidza, akazvipirawo kune utapi venhau, achitove director wepepanhau "Kuchamhembe kweCastile".
Asi isu hatingasangane nemunyori weDelibes kusvika mu gore 1947 hapana chavakapihwa uye hapana chakaderera pane iyo Nadal Mubairo weMabhuku yebasa rake "Mumvuri wecypress wakareba", chimwe chezvinyanyo kuzivikanwa zvemunyori. Iri basa rinorondedzera zvimwe zviripo zvinoshushikana sekushushikana nerufu uye / kana kusafara.
Nebasa rake rakaburitswa muna 1950, "Nzira", basa ratichapfupikisa muchidimbu pazasi, maDelibes anovhurira nzira yezvazviri mumusha, ichateverwa nemamwe mabasa senge "Mwanakomana wangu akanamatwa Sisi" o "Diary yemuvhimi".
Miguel Delibes akatora zvinzvimbo zvepamusoro zve chiSpanish chinyorwa chenguva ino. Nezve pfungwa yake, iye pachake akazviratidza saiye Mukristu humanist akazvipira kumatambudziko enguva yake uye kupesana neruzhinji rwema bourgeois. Musiyano uripo pakati pebourgeois nehupenyu hwekumaruwa hwagara huri mucherechedzo mune zhinji rebasa rake rekunyora. Kana tikatarisa maitiro ake semunyori, vaDelibes vaive neanoshamisa hunhu semutauri wenyaya pamwe nekugona kunoshamisa kwekuratidzira mhando dzakasiyana dzezvakatipoteredza. Kunze kwaizvozvo, aive nemutemo wakasarudzika wemutauro wedu.
Nehurombo, akatisiya makore anoda kusvika masere apfuura, kunyanya munaKurume 8, 12.
Tevere, isu ticharondedzera muchidimbu chirongwa chebhuku «El camino», naMiguel Delibes.
Daniel Diki Zizi
Daniel aive mukomana ane makore gumi nerimwe ekuberekwa uyo waaiziva seChidiki Zizi. Aive ave pamubhedha achifunga nezverwendo rwaaizoita zuva raitevera rekunotanga zvidzidzo zvake zvepamusoro muguta.
Pakati pehusiku, Daniel akarangarira hudiki hwake pakati pevanhu vemupata: mupirisita, mudzidzisi, mupfuri, vanoshandisa runhare ... Nzvimbo ine mukurumbira inokodzera zviitiko zvekupona kwaDaniel neshamwari dzake nhatu: Roque, el Moñigo uye Germán, el Tiñoso.
La Mica naMariuca-uca
Zvakare chikamu chezviyeuchidzo zvake hukama hwaaive nahwo naMariuca naMica. Wekupedzisira, Mica, aive mukadzi wechidiki ane makore gumi kudarika Danieri, waaigara achinzwa rudo rwechokwadi rweplato. Rimwe zuva, Daniel akaenda kumba kwaMica kunotora chizi uye paakadzoka akasangana naMariuca. Akanga achimubvunza achisimbirira kuti sei anga ave akanaka zvekuti angounza chezi kuMica, nei zvakatora nguva yakareba kudaro, nezvimwe. Mariuca akafemerwa naDaniel, zvisinei, mune iyi hurukuro, akakujekesa kwaari kuti aive akashata uku Mica aive musikana akanakisa mutown. Mariuca akamira achichema zvisinga nyaradze.
Zvisinei, Daniel aizozoona kuti Mica ane mukomana uye kuti baba vaMariuca vafunga kuroorazve. Paanongoziva yekupedzisira, anotanga kunzwa hunyoro kumusikana, uyo, saiye, anofanira kubvuma ramangwana rake.
Mazuva ekupedzisira aDaniel mudhorobha asati aenda kunodzidza muguta anoonekwa nenjodzi inosuruvarisa yeshamwari yake Germán. Kubva ipapo zvichienda mberi, Danieri anonzwa kuti chimwe chinhu chikuru chaka "kufukidzwa" mukati make uye kuti kubva zvino hapana chingazove sezvazvaive kuita kusvika panguva iyoyo.
Kwayedza painotanga, Daniel anoziva kuti anga akamuka husiku hwese achirangarira nguva dzake dzekare mudhorobha nemumwe uye kuti nguva yasvika yekutarisana nekubva kwake kwave pedyo.
Kana iwe uchida Miguel Delibes, "Nzira" nderimwe remabasa ake akanakisa pamwe ne "Mumvuri wecypress wakareba". Izvo hazvigone kushayikwa kubva muunganidzwa wako wekupedzisa kuverenga Yakakurudzirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Pfupiso yebhuku iri «El camino» naMiguel Delibes